फिल्म ‘जानी नजानीको‘एउटीलाई मुटुमा घर’ बोलको गीत सार्वजनिक
कलाखबर संवाददाता,१३,पौष–काठमाडौं । फिल्म ‘जानी नजानीको’ पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै निर्माण युनिटले फिल्मको ‘एउटीलाई मुटुमा घर’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको हो । अम्बिका शर्माको शब्द, अर्जुन पोखरेलको संगीत र स्वर रहेको गीतमा अर्जुनलाई स्वरमा साथ दुर्गा खरेलले दिएकी छन् । मनिष श्रेष्ठ र सुमी मोक्तानमाथि खिचिएको गीतलाई कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेका हुन् । गीतमा कोरियोग्राफीले गीतको बिट भने पक्रन नसकेको अनुमान लगाउन...
खोटाङ साईनो कला केन्द्रको ब्यानर गीत सार्बजनिक ( भिडियो सहित )
कलाखबर संवाददाता ,१३, पौष–काठमाण्डौं । पूर्वीय नेपाल खोटाङ जील्लामा अवस्थित साईनो कलाकेन्द्रले आफ्नो व्यानर गीत सार्बजनिक गरेको छ । मेरो र उनको,उनको र हाम्रो सबैको चौतारी, एउटै हो लक्ष साईनो जोड्ने बनाउने फूलबारी आपसी माया पे्रम अनि राष्ट्र भावनाले ओतप्रोत गीतको कभर भिडियो बिहिबार सार्बजनिक गरिएको छ । भक्त विश्वकर्माको संगीत तथा साईनो कलाकेन्द्रका अध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठको शब्द रहेको मार्मिक गीतलाई कुमार सिन्जाली मगरले ऐरेञ्ज गरेका हुन् । साहित्य...
कलाखबर संवाददाता,१२,पौष–काठमाण्डौं । नेपाल किराँत कुलुङ संघ उपत्यका कार्यसमितिले राजधानी काठमाण्डौमा शुभकामना अदनप्रदान तथा वृहत साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । कुलुङ जातीहरुको बिशेष महान चाड मिनारी दाचाम लो निङदोङ चाक्चाकुरको अवसरमा सो कार्यक्रम गर्न लागीएको हो । हिन्दु धर्मावलम्बिहरुले दशै–तिहार मनाए जस्तै कुलुङ जातिहरुले पनि हर्ष र उल्लासका साथ यो चाड मनाउदै आएको छ । यो चाड पौष १५ देखि माघ १५ सम्म मनाउने चलन छ ।...
कलाखबर संवाददाता,११,पौष–काठमाण्डौं । डिपास इन्टरनेशलले मिस र मिस्टर शेर्पा २०१८ सौन्दर्य प्रतियोगिता कार्यक्रमको अन्तिम चरणको तयारीमा पुगेको छ । समुदाय भित्रको प्रतिभाहरुलाई प्रतिस्प्रधा गरि बाहिर ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गर्न लागीएको डिपास इन्टरनेशनलका कार्यकारी प्रमुख छेलामु शेर्पाले बताईन् । गत वर्षदेखि डिपास इन्टरनेशलले यो कार्यक्रम गर्दै आएकोमा मिस्टर शेर्पा प्रतियोता भने नेपालकै पहिलो प्रतियोता हो । गत बर्ष १२ जना सहभागी रहेका थिए भने यो वर्षको प्रतियोगीतामा १८ जना...
डिपास इन्टरनेशलले मिस र मिस्टर शेर्पा २०१८ सौन्दर्य प्रतियोगिता गराउदै
कलाखबर संवाददाता,१०,पौष–काठमाण्डौं । डिपास इन्टरनेशलले मिस र मिस्टर शेर्पा २०१८ सौन्दर्य प्रतियोगिता योगिता आयोजना गर्ने भएको छ । समुदाय भित्रको प्रतिभाहरुलाई प्रतिस्प्रधा गरि बाहिर ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गर्न लागीएको डिपास इन्टरनेशनलका कार्यकारी प्रमुख छेलामु शेर्पाले बताईन् । गत वर्षदेखि डिपास इन्टरनेशलले यो कार्यक्रम गर्दै आएकोमा मिस्टर शेर्पा प्रतियोता भने नेपालकै पहिलो प्रतियोता हो । डिपास इन्रटरनेशनलले मिस तथा मिस्टर शेर्पा २०१८ सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजना गरी समुदायमा रहेका...
गोकर्णमा आदीबासी किरात समाजद्वारा उधौली पर्व कार्यक्रमको आयोजना, यस्तो देखियो रौनक्ता भिडियो सहित
कलाखबर संवाददाता,८,पौष गोकर्ण,–काठमाण्डौं । शनिबार गोकर्णमा आदीबासी किरात समाजले उधौली पर्व कार्यक्रमको बिशेष आयोजना गरेको छ । आदिमकाल र परापूर्वकालदेखि नै आफ्नो मौलिक पहिचान र सभ्यतासँग रमाउदै आएका किरातीहरु एक प्रकृति प्रेमी हुन् । उधौली र उभौली पर्वलाई यी जातीहरुले बिशेष चाडको रुपमा मनाउने चलन छ । यो अवसरमा केन्द्रिय प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सांसद कृष्ण याख्खा राईको प्रमुख आतिथ्यमा किरात समाजले पहिलो मुखपत्र पत्रिका समेत लोकार्पण गरेका थिए...
कलाबखर संवाददाता,६,पुष–काठमाण्डौं । गायीका बिनिता राईले वाल गायक मनिष लिम्बुको नाम्मा उठेको रकम वितरण गर्नु भएको छ । बिहिबार अनुभव थकाली भान्सा घर कुसुन्तीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो रकम वितरण गर्नु भएको हो । लोक प्रीय वाल गायक मनिषको नाम्मा हाल कोरिया स्थित रहेका रजिन बाबु ( श्याम ) राईले पहल गरि जम्मा ४९,५०० रकम उठाएका थिए । बिदेशमा रहेका सहयोगी मनहरु जम्मा २५ जनाबाट सो रकम जम्मा भएको...
कलाखबर संवाददाता,६,पौष –काठमाण्डौ । हजारौं आम दर्शकको मन छुन सफल पवृती राईको गीत बजारमा सार्बजनिक भएको छ । २०७५ सालको ओखलढुङ्गा भिजन आईडल बिजेता समेत रहेकी राईले हजारौलाई रुवाउने मार्मिक पहिलो गीत बजारमा ल्याएको हो । पूर्वीय नेपालको खोटाङ जिल्लामा जन्मेकी राईले “ तिमीले छाडी जादा मेरो के हालत हुन्छ” ? बोलको गीत बजारमा ल्याएको हो । सानै उमेरदेखि नै गीत संगीतमा रमाउने सुनौलो सपना बोकेकी राईले...
कलाखबर संवाददाता,३,पुष–काठमाण्डौ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिले प्रत्येक बर्ष राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड प्रतियोगिता सम्पन्न गर्दै आईरहेको छ । यस बर्षको राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड भने गत बर्षको दाजोमा केही फितलो भएको महशुष गरिएको छ । शिब हमालले आफ्नो कार्यकालमा अवार्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुनै सफल नपाएको र कसैलाई पनि चित्त बुझाउन नसकिएको आरोप लगाईएको छ । यो लोक दोहोरी अवार्ड को सुरुवात...
कलाखबर संवाददाता, २८, मंसिर–काठमाण्डौं । गायीका बिनिता राई र पछिल्लो समय मिडियामा चर्चा कमाउन सफल वाल गायक मनिष लिम्बुको संयुक्त स्वरमा नयाँ रोचक गीत रेकर्ड गरिएको छ । हाल कोरियामा अवस्थित रजिन बाबु राईको शब्द रहेको सो गीतलाई कुसल गायक सुहाङ लिम्बुले संगीत गरेका हुन् । असनैको बजारमा सिठी मार्यो कल्ले ………बोलको गीत गत बिहिबार सातदोबाटो स्थित जे.एम. सी. स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो । निकै रोचक शब्द र...